४ वर्षका बालकको हर्नियाको अपरेशन गर्दा डाक्टरको लापरवाही, बालक नपुंसक भए – Dcnepal
४ वर्षका बालकको हर्नियाको अपरेशन गर्दा डाक्टरको लापरवाही, बालक नपुंसक भए
प्रकाशित : २०७९ असार ९ गते १६:३०
काठमाडौं । अमेरिकाको टेक्सासमा चिकित्सकको लापरवाहीको एउटा गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको छ, जसमा एक चार वर्षीय बालकको आंशिक रूपमा भ्यासेक्टोमी गरिएको छ। सहरका एक दम्पतीले आफ्नो चार वर्षीय छोराको हर्नियाको शल्यक्रिया स्थानीय अस्पतालमा गराए जहाँ आफ्नो बच्चाको उपचारमा लापरवाही भयो। यो लापरवाहीका लागि दम्पतीले अस्पताल र डाक्टरविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् ।
फक्स फोरको एक रिपोर्टका अनुसार आमाबुवा जोस र क्रिस्टल ब्रोडले सुनुवाइमा आफ्नो छोराको दाहिने अण्डकोश सुन्निएको बताए । यसपछि उनीहरीले टेक्सास बाल अस्पतालका युरोलोजिस्ट डा. सुजेन एल जारोससँग परामर्श गरे। डाक्टरले हर्निया उपचारका लागि गत अगस्टमा बच्चाको ल्याप्रोस्कोपिक शल्यक्रिया गरेका थिए। यो शल्यक्रिया डा. जारोस र अर्का सहकर्मीले संयुक्त रुपमा सम्पन्न गरेका थिए।
शल्यक्रियापछि आएको रिपोर्टमा बच्चाको शुक्रकीट नलीमा केही तन्तु देखियो । यी तन्तुहरूले वीर्यलाई स्खलन अघि मूत्रमार्गमा पुर्‍याउँछन्। परिवारका वकिल र्यान्डी सोरेल्सले सम्पूर्ण मामिलाबारे कुरा गर्दै भने, ‘डाक्टरले टुडी प्रविधि प्रयोग गरेर बच्चाको ल्याप्रोस्कोपिक शल्यक्रिया गरेका थिए । यसमा बच्चाको शरीरमा खुला चीरा बनाइँदैन। शल्यक्रिया गर्दा टिभीको स्क्रिन हेरेर डाक्टरले गलत नली काटिएको देख्न सकेनन् ।’
जोश र क्रिस्टल ब्रोडले दायर गरेको मुद्दामा परिवारलाई गल्तीको बारेमा जानकारी दिइएको बताइएको छ। यसबाट बच्चाको प्रजनन क्षमतामा कमी आउन सक्ने उनीहरुलाई भनिएको थियो । तर डाक्टरले बिरामीको सामान्य स्याहारसुसार पनि गर्न नसकेको भन्दै बच्चाका बुबाले डाक्टरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् जसका कारण आफ्नो बच्चाले भविष्यमा धेरै दुःख भोग्नु पर्नेछ ।
मुद्दामा आरोप लगाइएको छ कि उनीहरूको अहिलेको ५ वर्षीय छोराले आफ्नो भविष्यको जीवनमा प्रजनन समस्याहरूको सामना गर्नेछ। उनले भविष्यमा उपचार खर्च, पीडा, मानसिक पीडा, शारीरिक हानि र प्रजननका लागि भविष्यको खर्चको सामना गर्नुपर्नेछ। परिवारले डाक्टर र अस्पतालसँग १० लाख डलर क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । यसबारे अस्पतालले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । हर्निया उपचार शल्यक्रियाको क्रममा शुक्राणुको कर्ड वा अन्य कुनै अंगमा क्षति पुगेको घटनाहरू थोरै छन्।
अमेरिकाको क्लिभल्याण्ड क्लिनिकका अनुसार, ग्रोइन क्षेत्र (पेट र तिघ्रा बीचको भाग) मा हर्नियाले लगभग १ देखि प्रतिशत युवा केटाहरूलाई असर गर्छ। यो ६ वर्ष मुनिका बच्चाहरु मा धेरै सामान्य छ। यो तब हुन्छ जब पेट र जननेंद्रिय बीचको क्षेत्र जन्मनु अघि पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन।
यदि यसको उपचार गरिएन भने यो हर्नियाले रक्तसञ्चारमा समस्या ल्याउन सक्छ। यसले बच्चाको गुप्तांग सुन्निन सक्छ र मृत्यु समेत हुन सक्छ। क्लिभल्याण्ड क्लिनिकका अनुसार, यस प्रकारको हर्नियालाई एक घण्टा भन्दा कम समय लाग्ने शल्यक्रियाद्वारा उपचार गरिन्छ। सान फ्रान्सिस्को विश्वविद्यालयको शल्य चिकित्सा विभागको वेबसाइट भन्छ कि यो प्रक्रिया सामान्यतया सुरक्षित छ र कुनै जोखिम छैन।